सुर्खेतमा तरुण दलका वडा उपाध्यक्षमाथी खुँ’डा प्र’हार!:: Mero Desh
सुर्खेतमा तरुण दलका वडा उपाध्यक्षमाथी खुँ’डा प्र’हार!
Published on: ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार १६:३१
सुर्खेतमा तरुण दलका एक वडा उपाध्यक्षमाथि खुँ’डा प्र’हा\_र भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का तरुण दलका उपाध्यक्ष समेत रहेका २५ व र्षीया सन्तोष गिरी माथि वीरेन्द्रनगरको धमला चोकमा खुँ’डा प्र’हार भएको प्रहरीले बताएको छ।शुक्रबार बेलुकी ६ बजेतिर धमला चोकको एक कटेजमा घ’ट’ना भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले गिरीको दायाँ हातको बुढी औँला र बायाँ हातमा चो’ट लागेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यद्यपि, उनले घ’ट’ना’बारे थप कुरा अनुसन्धानपछि जान कारी गराउने बताए । मोटरसाइकलमा आएको एक समू’हले सन्तोषमाथि खुँडा प्रहा’र
गरेको तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष हरि विष्टले रातोपाटी लाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘घ’टना’को सुरुवात बिहीबार साँझ एक होटलबाट नै सुरुवात भएको बुझिएको छ। खुँडा हा’न्ने को हुन भन्नेबा रे स्पष्ट जानकारी भने आए को छैन ।’ गिरीको वीरेन्द्रनगरस्थित माया नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको बताइएको छ।
यो पनि,, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले संविधान अनुसार वर्तमा न सरकारले नै निर्वाचन गराउने बताएका छन् । धनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले गठबन्धन सरकारले नै आगामी निर्वाचन गराउने बताए ।
संविधानअनुसार यो सरकार बनेको बताउँदै उनले अहिले पनि देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भइरहेकाले साव’धा’नी अपनाई समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । “हामी कसैको प्रभावमा पर्नु हुँदैन”, उनले भने, “आफ्नो समस्या आफैँ हल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”
उनले प्रतिगमनको ख’त’रा अझै कायम रहेकाले सजग हुनुपर्ने बता ए ।डा.भट्टराई जसपाको सातवटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्र म सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिमस्थित धनगढी आइपुगेका हुन् । जसपाको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पार्टीका अगुवा नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो।साभार : रातोपाटि